Laba qof ayaa mindi lagu weeraray weerar kale oo argagixiso Islaamiyiin ah oo ka dhacay UK
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Crime » Laba qof ayaa mindi lagu weeraray weerar kale oo argagixiso Islaamiyiin ah oo ka dhacay UK
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Crime • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka UK • Wararka kala duwan
Nin 57 sano jir ah ayay xireen booliska Lancashire ka dib markii uu si xun u weeraray labo haween ah oo uu mindi ku galiyay magaalada Burnley ee waqooyiga England. Sida ay wararku sheegayaan weerarku wuxuu umuuqday mid kadis ah oo aan laga fiirsan.
Booliska ayaa ku warramay in looga yeeray dhacdo 9:30 subaxnimo ee waqtiga maxalliga ah ka dib markii laba dumar ah lagu tooreeyay laanta magaalada Burnley ee dukaanka caanka ah ee Marks & Spencer.
Labada dhibbane ayaa loo qaaday isbitaal iyaga oo qaba dhaawacyo halis ah, laakiin dhaawacyada looma maleynayo in ay yihiin kuwo naftooda halis ku ah, sida lagu sheegay bayaanka booliska. Baarayaasha ayaa xaqiijiyay in mindi lasoo saaray.
Warbixinnada maxalliga ah waxay soo jeedinayaan in xubno ka tirsan dadweynaha ay ku guuleysteen inay qabtaan 57-jirka weerarka soo qaaday ka hor inta aysan booliisku goobta gaarin.
Sawirro iyo fiidiyowyo ayaa khadka tooska ah ka soo baxay oo muujinaya xilligii ay booliisku qabteen ninka weerarka gaystay. Ninkan, oo sida ay booliisku sheegeen ka soo jeeda degaanka isla markaana da'diisu tahay 57, wuxuu u muuqdaa mid deggan maadaama ay askartu katiinad kaga xidhan yihiin bannaanka dukaanka.
Dharka ninkan ayaa horseeday in badan oo baraha bulshada ah inay ogaadaan inuu yahay nin raacsan diinta Islaamka ayna u soo jeedinayaan in weerarka uu salka ku hayo arrimo diimeed; sikastaba, booliska ma uusan xaqiijinin wax ujeedo ah tooreyda.
Weerarkan ayaa imanaya iyadoo England dib loo furay Arbacadii kadib muddo bil ah Covid-19 xiritaanka iyo waqtigii loogu talagalay dukaamaysiga Kirismaska.
Bishii Nofeembar, heerka khatarta argagixisanimo ee Boqortooyada Midowday waxaa laga soo qaaday “mid la taaban karo” oo laga dhigay “daran” oo ah “taxaddar taxaddar ah” ka dib markii dhowr weerar oo argagixiso lagu qaaday Faransiiska iyo Austria.